Xisbi siyaasadeed cusub oo Muqdisho laga daah furay + Sawirro - Latest News Updates
Xisbi siyaasadeed cusub oo Muqdisho laga daah furay + Sawirro
Maanta waxaa Magaalada Muqdisho laga daah furay xisbi siyaasadeed cusub, kaasi oo furitaankiisa ay ka soo qeyb galeen xildhibaano ka tirsan labada Gole, siyaasiyiin, Xildhibaano horay uga mid ahaa Baarlamanadii ugu dambeeyay, mas’uuliyiin, haween, dhallinyaro, waxgarad iyo aqoonyahano ka kala yimid gobolada Shabeelooyinka iyo magaalada Muqdisho.
Xisbigaan cusub oo lagu magacaabo Xisbiga Sinnaanta Midnimada Nabadda Soomaaliya ayaa waxaa furitaankiisa khudbado kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah ka soo qeyb galayaasha, kuwaasi oo iyagu siyaabo kala duwan uga hadlay xisbigaan cusub iyo howlaha looga fadhiyo oo ka tarjumeysa saddexda xaraf ee uu ka kooban yahay.
Guddoomiyaha xisbiga midnimada Jamhuuriga Soomaaliyeed Cali Maxamed Nuux (Tima Jilic) oo halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa ku nuux nuuxsaday in xisba Sinnaanta Midnimada Nabadda Soomaaliya ay soo dhoweynayaan, wuxuuna sheegay in isagoo ka wakiil ah ku dhowaan 50-xisbi siyaasadeed ee dalka ka jira si weyn ugu faraxsan yahay asaaska xisbigaasi.
“Xisbiga Sinnaanta Midnimada Nabadda Soomaaliya waanu soo dhoweyneynaa anigoo ku hadlaya afka xisbiyada dalka ka jira” ayuu yiri Cali Maxamed Nuux Tima Jilic oo sheegay in nidaamka axsaabta axsaabta badan ee dalka ka hana qaadaya ay astaan u yihiin in horay loogu sii socdo Dimoqoraadiyadda iyo aftida dadweynaha.
Waxa uu sheegay inaan la eegin tira badnimada xisbiyadda dalka ka jira, taasi oo uu sheegay in dhammaantood ay ku midoobayaan laba xisbi oo kaliya inay aakhirka u tartamaan doorashooyinka dalka ka dhacaya.
Dhinaca kale Cali Tima Jilic ayaa ugu baaqay shaqsi kasta oo madaxweyne dalka ka noqonaya inuu barto labada lahjadood ee dalka looga hadlo oo kala ah: Maxaa tiri iyo May, isagoona ku booriyay ragga damaca uu uga jiro inay madaxweyne dalka ka noqdaan inay koorso u galaan barashada lahjadda afka Maayga.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa isna halkaasi ka jeediyay khudbad uu uga hadlay isbedelka uu maanta dalka ku tallaabsanayo, isagoona sheegay in xisbigaan cusub uu astaan u yahay in dadka la yaso ay maanta soo jeedaan, isla markaana codkooda siinayaan hadba xisbigii ay danahooda u hiillinaya.
“Soomaaliya ilaa 1960kii ayay dadka la yaso amaba xaqooda la duudsiinayay, maanta waxaan way diideen in dalku uu ku socdo dulmigii shalay lagu sameeyay” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa oo hoosta ka xariiqay in madaxda Xisbiga Sinnaanta Midnimada Nabadda Soomaaliya looga fadhiyo inay ka dhabeeyaan astaanta magaca ay la baxeen.
Dhinaca kale waxaa iyana halkaasi Axmed Yangi oo isagu ka wakiil ahaa Guddoomiyaha Xisbiga Sinnaanta Midnimada Nabadda Soomaaliya ayaa ka qeyb galayaasha munaasabadda furitaanka uga akhriyay warmurtiyeed dhinacyo badan khuseeya, wuxuuna ugu baaqay dhammaan axsaabta dalka inay la yimaadaan wada shaqeyn iyo kalsoonida shacabka ay matalaan kordhiyaan.
“Dowladda Federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxaan ugu baaqayaa inay ogolaan in axsaabta ay xafiisyo ka furtaan gobolada dalka isla markaana aan yeelano wada shaqeyn labada dhinac ah” ayuu yiri Axmed Yangi oo dhinaca kale hoosta ka xariiqay in dalka Soomaaliya mar kale cagihiisa isku taagay isla markaana dalalka deriska ah ugu hanjabay in haddii ay faragelinta ka deyn waayaan ay la kulmayaan jawaab degdeg ah.